Aabaha dhalay feeryahanka caanka ah ee Ruushka Habib Noor Muhammadov ayaa geeriyooday… – Hagaag.com
Posted on 4 Luulyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Feeryahanka Irish-ka Conor McGregor ayaa wuxuu tacsi u diray ninka xifaaltanka kala dhaxeeya dhinaca feerka ee reer Dagestan Habib Noor Muhammadov geerida ku timid aabihiis Abdul Manaf oo ku geeriyooday Isbitaalka sababo la xiriira cudurka coronavirus.
McGregor ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray – isaga oo u qalbi qaboojinaya ninka sida weyn ula tartamay, “luminta aabe, tababare iyo taageere daacad u ah isboortiga, tacsi ayaan idinka soo diray … nabad ku hurud Abdul Manaf Nur Mammadov”.
Madaxweynaha Chechen Ramzan Kadyrov wuxuu ku dhawaaqay geerida Abdul-Manaf, wuxuu yidhi, “Magaceyga iyo kan Dadka reer Chechen waxaan tacsi u dirayaa qoyska Abdul-Manaf Nur Muhammadov, wuu naga tagay wuxuuna nooga tagay sumcad wanaagsan iyo jiil mudan oo xoog leh.”
Abdul Manaf wuxuu ku dhintey da’da 57 sano kadib markii ay la soo deristey dhibaatooyin caafimaad kadib markii uu ku dhacay cudurka Coronavirus.
Abdel-Manaf ayaa waxaa qabtay wadno xanuun taas oo keentay in loo qaado Isbitaalka dhamaadkii bishii April ee la soo dhaafay, isla markaana wuxuu galay kooma laba jeer, isaga oo lagu tilmaamay xaaladiisa markaasi kadib “mid culus”.
Habib ayaa muujiyey inuu maalin kasta aabihiis booqanayay, wuxuuna yiri, “wuu i garanayay, laakiin wax xiriir ah oo dhinaca jirka ah nagama dhexeeyn maxaa yeelay waxaa ku rakibnaa qalabka dib u soo kicinta.”
Wuxuu ku daray, “Waxay ii saamixi jireen inaan u galo maalin kasta, la qaato saacad badhkeed, waxaan kor u qaadi jiray gacantiis oo weydiin jiray ma i garaneysaa? wuxuu ku jawaabi jiray tilmaamo.”
About Admin (10968 Articles)